Hetsika sindikaly : tsy misy antenaina avy amin’ny FATE (+vidéo)
Ny telo taona voatery niaraha-niaina taminy amin’ny maha-« mpitondra » azy dia nahatsapana fa tompondakan’ny lainga i tgv. Na dia vao nanomboka aza izay ireherehany fa hetsi-bahoaka notarihiny dia efa maro ny nahatsinjo izany toetrany izany. Tao anatin’ny fitadiavam-bahaolana ho an’ny krizy moa dia isan’ny nampikatso ny fifanarahana rehetra natao io fahaizany mandainga io. Hafa ny ambarany manoloana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary hafa ny ataony rehefa tratrin’ny aretin’ny fahefana kely eo am-pelatanany izy.
Tokony maka lesona amin’izany tranga rehetra izany ireo sindika manan-jo takiana amin’ny mpitondra amin’izao fotoana. Izay vahaolana mety haroson’ny ekipan’i tgv dia famonoana afo hampitsahatra ny fitakian’ny vondrona tsirairay ihany fa tsy hanomezana fahafaham-po na hanajana izay zo takian’ireo mpanao fihetsiketsehana akory. Iza no tsy mahita fa na ny vary 1000 Ar nampanantenainy teny an-dalam-be aza tsy tanterany ankehitriny fa naleony nividy fiaramanidina efa lany andro tany Frantsa. Ny fiverenana mandinika ny loharano fototra mampikorontana ny Firenena dia hampazava endri-javatra maro ao anatin’izay mety fitakiana ataon’ny sindika isan-tokony satria mila sitranina ifotony ny aretini Madagasikara fa tsy safoina ivelany lalandava toy izay nitranga tao anatin’izay telo taona izay.
Vondron’ny mpanohitra : amin’ny 13 May ny fotoana (+vidéo)
Hiatrika ny asa voalohany iombonan’ireo hery ao anatiny ny vondron’ny mpanohitra ary fankalazana ny faha-40 taonan’ny 13 May 1972 no anombohany izany. Araka ny fanazavan’ny mpandrindra dia samy hanana ny ny fomba hanamarihany izany ireo hery mpikatroka ao anatin’ity vondrona ity saingy ny fahatsiarovana izany tolona nitondra fanovana teto amin’ny Firenena izany no foto-kevitra iombonana. Ny tolakandron’ny alahady 13 May 2012 ary dia manome fotoana ny vahoaka Malagasy ny « Front de l’opposition pour la libération de Madagascar ».
Araka ny efa nomarihin’ny mpandrindra hatrany am-boalohany dia tsy miankina amin’izay mety Ankolafy politika na firehana sosialy misy azy ireo akory ny hetsika izay atao fa entina indrindra hamondronana ny mpanohitra ny FATE mba ho hery iray goavana afaka hitondra vahaolana amin’ny krizy.
Ezaka olom-pirenena tsotra : hiroso amin’ny dingana manaraka ny vondrona (+vidéos)
Rahampitso 09 May 2012 no hiatrika ny dinika handinihana ny « action » hataon’ireo vondrona isan-karanzany izay nitambatra hanoahatra ny fitondrana amin’izao fotoana. Araka ny fanazavana nentin’i Lalatiana Ravololomanana dia amin’ny maha-olom-pirenena azy ireo no itondran’izy telo mianadahy ny anjara biriky amin’ny fitadiavam-bahaolana fa tsy miainga amin’ny firehana na antoko politika misy ny tsirairay. Ny fihaonana fiandohana nataon’izy ireo ny sabotsy lasa teo dia nahafahana nametraka ny asa tokony hatrehina maika sy nitodika ny lasa mba hibanjinana indrindra ny hoavy.
Endrika tolona tsy mivaona amin’ny famahana ny gejan’ny Firenena vokatry ny fanonganam-panjakana no imasoan’izy telo mianadahy ireto araka ny fanazavana ihany. Olana goavana amin’ny famahana ny krizy eto amintsika mantsy, araka ny fahitan’izy ireo, ny fisian’ny «fisabakana » ara-politika loatra ka tsy fipetrahan’ny ady hevitra mazava eo amin’ny mpanohitra sy ny mpomba an’i tgv. Ny fahitan’izy ireo izany indrindra no nanapahany hevitra ny hanambatra ny mpanohitra mba ho hery iray matanjaka afaka hifanandrina amin’ireo mijoro mandidy dia homana eto Madagasikara.
Maika ihany koa anefa ny asa satria manomboka efa lasa lavitra ny vokatry ny krizy. Singa nandrefesan’izy ireo izany ny fifandarohan’ny samy eo amin’ny fitondrana sy ny fitokonana etsy sy eroa. Nosinganina manokana ny mikasika ny mpampianatra sy ny mpianatra izay, raha tokony fitakiana am-pilaminana, dia nidiran’ny hery famoretana ka zary nitarika fisamborana sy fandratrana mpianatra mihitsy. Noho izay hamehana izay indrindra no hirosoan’ity vondrona ity amin’ny asa avy hatrany. Ny fanombohan’ny asa kosa dia nomarihin’ny mpandrindra fa iaraha-manapaka eo anivon’ny vondrona mba ho fanombohana ny fiaraha-mientana sy ho modelin’ny fiaraha-mitantana marina izay endrika tokony hitondrana tetezamita tsy mitanila.
Raharaha 28 Aprily : afaka izy telo mirahalahy (+vidéos)
Niakatra fitsarana androany izy telo mirahalahy mianaka nosamborin’ny hery famoretana nandritran’ny hetsika nataon’ny mpiara-dia amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA tamin’ny 28 aprily lasa teo. Tsy ampy ny porofo ary tsy nisy ny vavolombelona noho izany dia nafahin’ny fitsarana noho ny fisalasalana izy ireo. Raha ny fanazavana nentin’ireo mpisolovava dia faniratsirana mpitandro filaminana, fanimbana fananan’olona, fandraisana anjara amin’ny hetsika tsy nahazahoana alalana ary filazana fa « tsy maintsy matiny » i tgv no niampangana azy telo mirahalahy mianaka.
Sary teny Anosy
Tsy mbola tapitra …
Antenanin’ny maro fa fiandohan’ny fahaleovan-tenan’ny fitsarana Malagasy ity raharaha androany ity. Raha ny famoretana ireo mpitarika politika amin’ny alalan’ny fitsarana mantsy dia tsy mbola mitsahatra. Ny 18 May hoavy izao dia efa hiakatra etsy Anosy indray i Mamy Rakotoarivelo izay lehiben’ny delegasiona Ankolafy RAVALOMANANA. Raha tsy ho voasakana arak’izany ny famoretana ara-politika dia antenain’ny mpanara-baovao fa hitana ny teny nomeny ny sindikan’ny mpitsara eto Madagasikara manomboka eto ka hanohy ny lalana efa natombony androany.
Famahana ny krizy : misy lalam-baovao (+vidéos)
Olana goavana tsy nahitan-dalana amin’ny famahana ny krizy eto Madagasikara ny fivakivakian’ny fiaraha-monina Malagasy. Maro no zary voabaikon’ny vola sy ny voninahitra hany ka manadino ny firaisan-kina izay fototry ny fahombiazana amin’ny tolona izay atao. Taorian’ireo fehin-kevitra isan-karazany sy ny fomba na tetikady etsy sy eroa lazaina hamahana ny krizy dia misy ireo mpiray tanindrazana manomboka mijoro ka sahy miantso fivondronana amin’ny hery izay mitovy tanjona ahafahana manohitra sy mandrodana izay fanjakana tsy ara-dalàna nefa mibodo toerana.
Avadika ho hery …
Nahafahana nandrefy ny fahasamihafana ny ady hevitra satria afaka nitodika ny lasa sy namotsitra izay fery anaty tsy nahitam-bahaolana hatrizay ny mpizaika. Fanombohana ihany izany ary tanjon’ny mpikarakara ny hahitana soritra sahady ny fahaizana manambatra izany fahasamihafana izany ho lasa fanoitra ho an’ny vondrona ka hanosika azy ireo hijoro amin’ny hanarenana ny Firenena. Raha ny fahitana ny fifanakalozan-kevitra dia hizotra any amin’ny asa avy hatrany ny teti-andron’ity vondrona iray ity ary nanome toky izy ireo fa hanao izay hampivelatra izany amin’ny sehatra samy hafa eto amin’ny Firenena. Nanambara moa Lalatiana Ravololomanana fa vonona ny hiara-miasa amin’izay rehetra sahy mijoro handrodana ny fitondran’i tgv izy ireo satria efa mazava fa ireto farany no olan’ny Firenena amin’izao fotoana izao.
Ampahany amin'ny ady hevitra :
Tondro zotra : mandidy dia homana ny FATE (+vidéos)
Ampanantsoina eny amin’ny fitsarana indray ireo mpitari-tolona amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA amin’ity volana May ity. Ny 04 May izao dia Manandafy Rakotoniriana sy Ihanta Randriamandranto no antsoina ary ny 18 May kosa dia anjaran’i Mamy Rakotoarivelo no miatrika ny fitsarana ady heloka bevava etsy Anosy. Voahosy indray izany ny andininy faha-16 ao amin’ny tondro zotra izay mampiato avy ahtrany ireo fanenjehana rehetra manomboka amin’ny fotoana nanaovana sonia.
Tsy vitan’izany fa noho ny fahasahian’ny Ankolafy manao fanamby politika amin’ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA dia miainga eny Tsimbazaza amin’izao fotoana ny volavolam-pitsipaham-pitokisana ataon’ny mpikambana avy amin’ny ankolafy mpanongam-panjakana. Tsy hitondra fitoniana sy filaminana velively ny fanosena ny tondro zotra toa izao satria, hatreto aloha, dia io no nifanarahana fa hamoahana ny Firenena ato anaty krizy ary niaraha-nanao sonia ka tokony hajaina. Miala nenina amin’ny herin’ny fianakaviam-be irasaim-pirenena ihany koa ny Ankolafy RAVALOMANANA amin’izao fotoana satria raha ny tranga momba ny fanilihana an’i Camille Vital fotsiny ohatra dia manosika hanantena sy hino fa matanjaka izy ireo saingy somary ela ny fiasany miohatra amin’ny fahadodonan’ny Malagasy hiarina.
Izay indrindra …
Araka ny toromarika hentitra nomen’ny Filoha RAVALOMANANA omaly ary dia namafisin’ny delegasiona androany fa tsy nisy nanatrika ny fanokafana ny fotoam-pivoriana ara-potoana tany amin’ny parlemanta roa tonta izy ireo. Tsy hiatrika ny filan-kevitra isan-tokony ihany koa ireo ministra ary hiato amin’ny asany ny mpikambana ao amin’ny CENIT avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA noho izany. Nambaran’i Mamy Rakotoarivelo fa tsy familafilana akory no anton’izany fa fanaporofoana amin’izao tontolo izao fa ny FATE no manao izay hampikatso ny tondro zotra. Andrasana arak’izany izay mety fanapahan-kevitry ny SADC mikasika ny fanatanterahana ireo andininy rehetra hametrahana ny fitoniana satria ny fitakiana izany no votoatin’ny taratasy nomena azy ireo teny Ivandry niaraka tamin’ny vahoaka. Notsindrian’ny lehiben’ny delegasiona rahateo fa ny fikasana hanisy fepetra ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA dia midika avy hatrany tsy fitsinjovana izay fiaraha-mitantana sy tsy fanajana ny sonia natao tamin’ny tondro zotra. Raha fehezina izany dia ny fanehoan-kevitry ny TROIKA an’ny SADC mikasika ny tondro zotra sy ny tranga teny Ambohijatovo ny sabotsy lasa teo no singa hamaritra ny fanapahan-kevitra goavana horaisi’nny Ankolafy RAVALOMANANA. Mandrapahatongan’izany anefa dia miato ny fandraisan’anjaran’izy ireo amin’ny fiaraha-mitantana.
Tetezamita : miala aina ny fiaraha-mitantana ... hiova lasy Magro (+vidéos)
Vaky ny ady, mihenjana ny Ankolafy RAVALOMANANA. Taorian’ny hetsika teny Ambohijatovo ny sabotsy lasa teo dia fanapahan-kevitra lehibe no noraisin’ny Ankolafy RAVALOMANANA androany. Ankoatra ny toromarika nampitain’ny Filoha RAVALOMANANA momba ny fivoahana amin’ny andrim-pitondrana dia tsy hitsahatra amin’ny fikatsahana toerana ahafahana mahazo toerana hanaoavana tatitra amin’ny vahoaka ity Ankolafy ity. Namafisin’ny lehiben’ny delegasiona fa ny antony nanaovana sonia ny tondro zotra tamin’ny volana septambra 2011 dia ny fiandrandrana ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA haingana taorian’izany.
Fito volana aty aoriana anefa dia tsy mbola hita izay tara-pahazavana momba izany tanjonan’ny vahoaka izany. Manampy trotraka izany ny fihetsika ataon’Ambohitsorohitra izay tsy maneho fahavononana hanaja ny fiaraha-mitantana velively. « Tsy maintsy azontsika Ambohijatovo, alaintsika Imahamasina ary idinantsika ny Kianjan’ny 13 May » hoy i Mamy Rakotoarivelo « ary raha mbola ilaina koa dia iakarantsika Ambohitsorohitra ». Nambaran’ny filohan’ny kongresy manko fa nolazaina fa hetsi-bahoaka ny fananihan-dapa tamin’ny 2009 noho izany dia tsy fahotana velively « ary afaka alain-tahaka ».
Ny firaisan-kina no ampinga …
Nitondra fanazavana mikasika ny zon’ny parlemantera manoloana ny mpitandro filaminana ny Me. Hanitra Razafimanantsoa. Voasoratra amazava any anatin’ny karatra maha-parlemantera azy ireo mantsy fa manan-jo hitaky fanampiana avy amin’ny mpitandro filaminana izy ireo amin’ny asa izay ataony saingy notsinotsinoavina izany ny sabotsy teo. « Rehefa tsy maharo antsika ny fahefana » hoy izy « dia ny fiaraisan-kina no maharo antsika ». Nambarany mazava ary fa ady no atrehina manomboka eto ary tsy tokony hihemotra amin’izany ny mpiara-mitolona rehetra. Mila ampitomboina hatrany ny isan’ny vahoaka sahy mandray andraikitra handrodana ny tsy rariny hoy izy. Namafisiny moa fa tsy andairana fampihorohoroana ny mpandala ny ara-dalàna. Manomboka rahampitso ary ny hetsika mahery vaika ka mifanome fotoana eo amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka ny vahoaka sy ireo mpitarika manomboka amin’ny 11 ora.Tsy hanatrika izay fivoriana sy filan-kevitra any anaty andrim-pitondrana intsony ireo olom-boatendry rehetra avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA fa hanotrona ny vahoaka amin’ny tolona manomboka eto.
Ambohijatovo 28 aprily 2012 : ampamoaka momba ireo teti-dratsin’ny FATE (+vidéos)
Tonga ny fotoana, hijoro hanao tatitra amin’ny vahoaka ny parlemantera avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA. Niezaka nifanipy andraikitra momba ny Kianjan’ny Demokrasia ny prefektiora sy ny CUA saingy tsy mampiova ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Ankolafy RAVALOMANANA izany. Androany ohatra dia nilaza indray ny tao amin’ny fiadidiana ny tanàn’Antananarivo renivohitra fa ny kianja mitafon’Imahamasina no homena ny Ankolafy saingy tsy hisitaka ny safidiny ireto farany.
Eny Ambohijatovo manomboka amin’ny 10 ora maraina izany no fotoana omen’ny CT sy CST ny vahoaka hanaovana tatitra momba ny zavatra tsy mety ao anaty tetezamita. Na dia iaraha-mahalala aza ny ankamaroan’izany dia andraikitra ho an’izay rehetra mitana ny asan’ny parlemantera ny manao izany tatitra izany amin’ny olom-pirenena mba tsy ho tompon-trano mihono izy ireo.
"Mbola kianjan'ny Demokrasia Ambohijatovo"
Tsy azo leferina intsony …
Nihoatra ny azo leferina ny zava–nitranga tany anaty andrim-pitondrana tamin’ny fandaniana ny lalàna mikasika ny famotsoran-keloka. Neritreretin’ny Ankolafy RAVALOMANANA fa fototra hampanjariana ny tondro zotra izany lalàna izany kinanjo nentin’ny FATE nikarohana fomba hanilihana ny Filoha RAVALOMANANA. Ny nanaovana sonia ny tondro zotra anefa dia ny hametrahana fitoniana mba ahafahana mamoaka ny Firenena amin’ny krizy saingy toa tsy mitovy ny tanjona ka nanapa-kevitra hiverina amin’ny vahoaka ny Ankolafy RAVALOMANANA.
Manandafy Rakotoniriana :
Me. Hanitra Razafimanantsoa :
Ho avy koa ny MONIMA
Fanamabarana miezinezina no nentin’ny vondrona parelemantera UAMAD/MONIMA androany mikasika indrindra ity hetsika karakarain’ny Ankolafy RAVALOMANANA ity. Ara-drariny tanteraka hoy izy ireo ny tatitra kasain’ny parlemantera hatao satria zon’ny vahoaka ny mahalala ny marina. Melohin’ny MONIMA arak’izany ny fikasana hanakana ny fahatanterahan’izany. Hatramin’ny taona 1958 niorenan’ity antokon’ny Raiamandreny Monja Jaona ity dia tolon’izy ireo izany fahafahana maneho hevitra malalaka izany ary isan’ny antony hanotronany ny Ankolafy RAVALOMANANA rahampitso izany. Teo am-pamaranana moa dia nirary ny hafahan’ireo sesitany politika rehetra miverina an-tanindrazana ny solontenan’ny MONIMA ary nosinganiny manokana tamin’izany ny Filoha RAVALOMANANA Marc.
Ambohijatovo 28 aprily 2012 : raharaham-pitondrana fa tsy kilalao (+vidéos)
Zon’ny vahoaka Malagasy ny mahalala ny marina momba ny tetezamita ary andraikitry ny olom-boatendry ny manao tatitra momba izany. Ny endrim-pitondrana vakiraoka teren’ny FATE hajoro dia manosika ny Ankolafy RAVALOMANANA hampandre mialoha ny vahoaka mba ahafahana mitandrina sy misoroka ny hevi-dratsin’izy ireo. Ny telo taona tao anaty krizy mantsy dia nahafahan’ny rehetra nandrefy ny finiavan’ny mpanongam-panjakana hanapotika ny hoavin’ny Firenena. Araka ny fanazavana nomen’ny olom-boatendry avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA dia fampahafantarana mariky ny fanajana fotsiny ihany ny fampandrenesana ireo tomponandraikitra amin’ny fitantanana ny renivohitra nataon’izy ireo fa tsy fangatahana alalana velively tsy akory.
Samy olom-panjakana avokoa manko na ny olom-boatendry avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA, na ny mpitantana an’Antananarivo renivohitra na ireo milaza azy fa mpitandro filaminana efa mampihorohoro mialoha ny vahoaka. Mahalala ny andraikitra miandry ny tsirairay ireo mpitondra ireo saingy minia mikipy amin’ny fahamarinana ny sasany noho ny fanompoana ny fitiavan-toerana sy ny fitiavam-bola.
Tsy fialana nenina intsony …
Ny fanaovana amboletra hanakana ny hetsika hataon’ny vahoaka sy ny Ankolafy RAVALOMANANA amin’ny sabotsy hoavy izao dia hampitombo ny herin’ny tolon’izy ireo ary hamparefo ny tetezamita vakiraoka tarihin’i tgv. Amin’ny fotoana hahitan’ny mpandala ny ara-dalàna izay mety ho endrika famoretana hanakanana izany dia hanamafy ao an-tsain’izy ireo fa tapitra tanteraka ny fialana nenina ka dingana hafa mahery vaika kokoa no hazahoan’ny Malagasy ny fahafahana.
Miakatra ny avy any amin’ny Faritra …
Tatitra ho an’ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka no hataon’ny CT sy ny CST avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA amin’ny 28 aprily. Amin’ny maha-renivohitr’i Madagasikara an’Antananarivo dia rariny tanteraka raha manomboka eto ny hanaovana izany. Misy avy hatrany anefa ny afaka mialoha lalana ho an’ireo mpiray tanindrazana avy any amin’ny faritra. Arak’izany dia efa maro amin’izy ireo no tsy naharitra ka nihazo ny renivohitra sahady handre izay marina mikasika ny tetezamita izay santatrin’ny fiaraha-manana hanorenana Repoblika vaovao ho an’ny taranaka faramandimby.
Transition : le limogeage du Pm en vue ?
L’absence de premier ministre de la transition lors du reboisement national à Andranovelona n’a pas laissé de marbre le président de la transition. A part les verves de ce dernier à l’encontre d’Omer Beriziky, les partisans de tgv se sont également versés dans des analyses fustigeant le chef du gouvernement. Pour eux, « Omer Beriziky voudrait prendre la place de Andry Rajoelina, vu que Marc RAVALOMANANA est un outsider maintenant, et serait mis à nu ». Sans être direct, les partisans demandent au président de la transition de « prendre des décisions adéquates suite à ce qu’ils appellent ‘’insubordination’’.
En d’autre terme, ils requièrent le remplacement du premier ministre. Selon eux, «en tant que chef d’état, défini par la feuille de route, il est habilité à procéder à ce changement. Comme le limogeage des ministres. Et comme le stipule la feuille de route, le chef de la transition a tout les droits de remplacer le premier ministre et d’en choisir un autre parmi la liste proposée par les parties prenantes ». Le président de la transition « légitimé par le peuple » selon leur terme « ne devra pas faillir à sa mission qui serait de mener à terme la transition par les élections ». Cette divergence entre Rajoelina et Beriziky a éclaté au grand jour au cours du conseil des ministres de mercredi dernier. « Lorsque le premier ministre s’est déchargé de l’organisation du reboisement ».Un reboisement boudé par le staff du locataire de Mahazoarivo et des ministres de la mouvance Ravalomanana, même si tgv a fortement mobilisé le gouvernement lors du conseil.